Rita, Writing for My Sake!: ရွှေအင်းဝ
ရွှေအင်းဝ (တေးရေး - အေဝမ်း ဆရာညှာ)
ခြေဆင်း။ ကကုသန် မြတ်စွာဘုရား ဘဂဝါ လက်ထက်တော်က ရတနာပူရ အမှန် ...
သုနာပရန္တအမည် တွင်ခဲ့ပါပေသည်။ ခုနစ်ရာနှစ်ဆယ်နဲ့ ခြောက်ခုပဲ မှတ်ယူစွဲ ရွှေအင်းဝ နေပြည် မြို့တော်ကြီးတည်။
ဧရာဝတီ စမုံ ဒုဋ္ဌဝတီ ဇော်ဂျီ ပန်းလောင်
ချောင်း မြစ် ငါးလီ ပေါင်းလို့ ဆုံကြသည်
သန်လျက်စွန်းပေါ်တွင် အင်းလေးအင်းကို ဖို့၍ မြို့တည်
သတိုးဘုရား ရာဇာဘုရင် စိုးစံသည်
မကောင်းတဲ့ ရန်ဝေးအောင် ချိုးဖျက်နှိမ်နင်းမည်
သြော် ဥဇ္ဇေနာ မင်းယုတ် သုတ်သင်ပြန်ပါသည်
စောဥမ္မာ ခင်မဒီ ဒေဝီ ကောက်လို့ မြှောက်တင်စံစားသည်
(တို့တိုင်း ဌာနီ ရွှေနန်းတော်တည် ပြသာဒ် ဘုံမြင့်ဆီ
စိန်တောင် ရောင်ခြည် တောက်ထွန်းပေသည် ပြောလို့ မကုန်တော့သည်
မင်္ဂလာကျက်သရေ ဖြိုးဝေတင့်ကာ မြို့ရွှေအင်းဝ သာယာဝပြောစည်။) *
မြန်မာမင်းတို့ ဘုန်းပန်းပွင့်လို့ အဆင့်ဆင့် လာခဲ့သည်
တန်ခိုးလည်း အဖြာဖြာ မညှိုးတဲ့ သာသနာ တိုးတက်ပြောင်လင်းကြည်
အလွန်ပင် စည်ကားသည် ဟိုစဉ် အခါကအတည်
နောင်လာ နောင်သား မှတ်ဖို့ စာစီ
ရွှေကူထူပါရုံ ထူးမြတ်တဲ့စေတီ ဦးခိုက် အဉ္ဇလီ ဖူးလိုက်ကြ ရွှေအင်းဝဆီ
အတွင်သီချင်း ပြဆိုမည် ရွှေအင်းဝ မြို့ဆီ
ရောက်တဲ့အခါ အနောက်ဘက်သာ ရှုမျှော်ကြည့် တွေ့လိမ့်မည်
မြစ်ဧရာ တဘက်ကမ်းမှာ လှမ်းလို့ မြင်ရသည် ပျိုလွမ်းသည်
စစ်ကိုင်းချောင် တောင်ထိပ်ဆီ မြင့်မြင့်မောက်မောက် အံ့လောက်စရာ အတည်
ပုညရှင်က စေတီ စေတီ ကြည်နူးဖွယ် အတည်
သူတော်စင်များ ကိန်းအောင်းကြတဲ့ ဂူကျောင်းဘုရားတွေ ပေါလို့ ရှိခိုးမည်
ခြေဆင်းမှာ ပါတဲ့ အနီရောင် နဲ့ ပြထားတဲ့ မြို့နာမည်က မသေမချာ စာလုံးပေါင်းထားတာပါ။
သိတဲ့လူ ရှိရင် ပြင်ပေးသွားနိုင်ပါတယ်။
အပေါ်ယံကြည့်ရင်တော့ ဒီသီချင်းမျိုး blog ပေါ်မှာ တင်တာရယ်၊ ဒီသီချင်းမျိုး ကြိုက်တတ်တာရယ်က မြန်မာ့ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှုကို နှစ်ခြိုက်မြတ်နိုးလွန်းလို့၊ ထိန်းသိမ်းချင်စိတ် ရှိလွန်းလို့ ထင်ချင်စရာပါပဲ။
အမှန်က ဘာမှ မဆိုင်ပါဘူး။
ကိုယ့်ဘာသာ ကြိုက်ချင်လို့ ကြိုက်တာပါ။
လူကဖြင့် ထမီတောင် ဝတ်ချင်တာ မဟုတ်ဘူး။
ထမီဆိုလို့ ထမီကလည်း မြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမှုမှ မဟုတ်တာ။
ဘယ်တိုင်းပြည်က ရောက်လာတယ် သေချာ မသိပေမဲ့ ယိုးဒယားဘက်ကလို့ ထင်တာပဲ။
သေချာတာကတော့ ပေါက္ကံရာမ နေပြည်တော်ကြီး ဘုန်းမီးနေလ တောက်ပစဉ် အခါက ထိုဒေသတွင်နေသော အမျိုးသမီးများ ထမီ မဝတ်ဘူး ဆိုတာပါပဲ။
Update: မယုံရင် ဘုရားထဲက နံရံပန်းချီတွေ သွားကြည့်ပါလား။ ဒီဇိုင်းတွေက အလန်းချည်းပဲ။ အေးလေ မြန်မာပြည် အလယ်ပိုင်းက ပူတာကိုး။ အဲဒီ ဒီဇိုင်းမျိုးတွေ ဘာလို့ ခုထိ မထိန်းသိမ်းထားနိုင်သလဲ မသိဘူး။ နှမြောစရာ တော်တော် ကောင်းတယ်။ ခုနောက်ပိုင်း Fashion ပြပွဲတွေမှာ ပေါက္ကံရာမယဉ်ကျေးမှုကို ပြန်ဖော်ထုတ်လာကြပြီလို့ ထင်တာပဲ။ ကောင်းတဲ့ အလားအလာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ကိုယ်တော့ ဉာဏ်မမီပါဘူး။
အဲဒီ သီချင်းထဲက အင်းဝခေတ်ရောက်တော့ ဝတ်နေကြပြီလား ဘာလားတော့ မသိပါဘူး။
ဒါကတော့ ညီလင်းဆက် တို့၊ သက်ပိုင်သူ တို့ မှ သိမယ် ထင်တယ်။
ထုံးစံအတိုင်း တေးရေးကိုလည်း မသိပြန်ပါဘူး။
မြို့မငြိမ်း ပဲလို့ ထင်ပါတယ်။ သိရင် ပြောသွားပါ။
ကိုယ်ကတော့ သီချင်းကို ကြိုက်လို့ တင်တာပါပဲ။
ဒီသီချင်းမျိုးတင်တာ သက်ဦးဆံပိုင် ဘုရင်စနစ်ကို အားပေးပြီး ယခု လက်ရှိ နေပြည်တော်ကြီးကို ထောက်ခံနေတယ် လို့ ထင်မယ် ဆိုလည်း ထင်လို့ ရပါတယ်။ စိတ် လုံးဝ မဆိုးပါဘူး။ :)
"ယူသော် ရ၏" လေ။
တခါတခါကျ အတွေးတွေကို ဉာဏ်မမီလို့ မီသလောက် လိုက်တွေးကြည့်ထားတာ။
ဒေါ်ခင်မျိုးချစ် စကား ပဲ သွားသွား သတိရမိတယ်။
"... ကိုယ်ဖြင့် ဉာဏ်ကို မမီဘူး။"
[တကယ်လဲ အဲဒီသီချင်းထဲ ပါသလိုသာဆို အဲဒီခေတ်က အတော် ကျက်သရေ မင်္ဂလာ ရှိမှာပဲ (လို့ ထင်တယ်)။ သုတ်သင် ဆိုတဲ့ စကားလုံးက လွဲလို့။ အေးလေ ဒါကလဲ ရှေးက ဘုရင်တွေ လုပ်နေကျပါ။]
အပေါ်က title အသေးကို click လုပ်ပြီး သီချင်းကို download လုပ်နိုင်ပါတယ်။
တေးရေး ဆရာညှာ ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ သုနာ ပရန္တကို စာလုံးပေါင်း အမှန် ပြောပြတဲ့ မမKOM စီဘောက်မှ ပလုံ ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Posted by Rita at 12/18/2009 08:21:00 PM
ဟုတ်တယ်စကပ်ထမီဝတ်တာ ရှေ့ခွဲ အဲဒါမြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမှုအစစ်
I love Myanmar Classic Songs including A-1 ဆရာညှာ.
ကျေးဇူးပဲ အစ်မ။ သီချင်းယူသွားတယ်။ ကိုယ်ကြိုက်ချင်လို့ ကြိုက်တာပဲ အစ်မရယ်..ဇာတိမာန်၊ ယဉ်ကျေးမှုကြောင့်တော့ ကိုယ်မကြိုက်တဲ့သီချင်းတွေ ကြိတ်မှိတ်နားမထောင်နိုင်ပါဘူး။ ကြိုက်တဲ့သီချင်းကိုလည်း ဘာကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်နားထောင်မှာပဲ..။ ထင်ချင်တဲ့သူတွေ ထင်ချင်သလိုထင်စမ်းပါစေ။